> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Apps in Android 4.4, KitKat
Android 4.4 waxaa loogu talagalay in aynu telefoonka iyo kiniin orod Android dhakhso iyo macaan. Haddii aad soo iibsatay Nexus Google 5, telefoonka ugu horeysay ee Android la Android 4.4, ama la casriyeeyay aad Nexus 4/7, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad ka ciyaari barnaamijyadooda qabow iyaga ku dhakhsaha badan. Si aad uga dhigto, ugu horreeya oo dhan, aad leedahay si ay u gudbiyaan oo ku rakibi barnaamijyadooda iyaga on. In this article, waxaan doonayaa inaan idin tuso siyaabo in ay barnaamijyadooda ka ah qalab Android jir ama kombiyuutarka wareejiyo qalabka Android la Android 4.4, KitKat in faahfaahinta.
Habka 1: barnaamijyadooda Nuqul ka aalad Android inay ka socda Android KitKat kale
Habka 2: barnaamijyadooda Transfer kombiyuutar si ay u qalab Android la Android 4.4
Habka 1: Koobiyee barnaamijyadooda ka aalad Android in kale socda Android KitKat
Ma waxaad moodaysay in aad wareejin karaan oo dhan barnaamijyadooda ku saabsan qalabka Android jirka ka mid ah in ay maamushaa Android 4.4 ee 1 click? Waxa ay u muuqataa aan la aamini karin, laakiin aad u samayn karaan iyaga oo aan ku xirid ah. The Wondershare MobileTrans (Windows) ama Wondershare MobileTrans u Mac waa waxa aad u baahan tahay in aad soo dhex dhibaato.
Download barnaamijka kala iibsiga telefoonka kombiyuutarka iyo hubi ka tutorial tallaabo-tallaabo. In ay qayb ka socda, ogolaanaysaa 'qaadan version Windows sida isku day ah.
Shaqada diyaarinta ah: MobileTrans Wondeshare ah, labo qalabka Android, laba USB fiilooyinka, kombiyuutarka Windows
Tallaabada 1. Connect laba qalab Android inay computer Windows ah
Ka dib markii ay soo degsado iyo ku rakibidda Wondershare MobileTrans ku computer Windows, waxaa lagu daahfuri oo aad ka heli doonaa suuqa kala hoose barnaamijka in aad jirtey in ay ku xidhmaan qalabka si aad u computer ah. Isticmaal fiilooyinka USB in ay ku xidhmaan laba qalabka Android si aad u computer Windows ah. Wondershare MobileTrans Ayaa iyaga si toos ah u aqoonsan doono.
Tallaabada 2. Transfer Chine in qalab Android la Android 4.4, KitKat ka mid ah oo kale
Dhammaan macluumaadka waa la saxay. Waa in aad ka saarto marks ka hor Xiriirada, fariimaha qoraalka ah iyo kuwa kale oo ay iska Apps saxday. Markaas, taga, oo guji Start Copy .
Xogta Clear hor nuqul waxaa loo isticmaalaa in la saaro dhamaan barnaamijyadooda badbaadiyey on kaydinta telefoonka iyo kaarka SD on qalab bartilmaameed Android ka hor app kala iibsiga. Sidaa awgeed, waa sax marka aad run ahaantii ma rabo in mar dambe sii barnaamijyadooda ka.
Maxaa dhacaya haddii aad leedahay mid ka mid kaliya qalab Android, sida Nexus 5, oo ay doonayaan in ay barnaamijyadooda wareejiyo leh? Xaaladdan oo kale, desktop-ka Wondershare MobileGo for Android waa mid kugu habboon. Waa tababare noocan oo kale ah smart Android app, taas oo keliya ma kaa caawinaysaa in aad ka kombiyuutarka wareejiyo iyo rakibi Chine in qalab Android aad la Android 4.4, laakiin sidoo kale ka shaqeeya dhammaataan ku duuban Chine in qalab Android aad socda Android 4.4.
Download iyo rakibi version maxkamad free of Wondershare MobileGo for Android ee kombiyuutarka. Markaas, raac tallaabooyinka fudud ee hoose.
Tallaabada 1. Isku qalab Android in waddaa Android 4.4 in kombiyuutarka
2 Siyaabaha waxaa laga heli karaa in la sameeyo xiriir: via cable USB ama WiFi. Wixii la xiriira WiFi, waxaa muhiim ah in aad hubiso in aad ayaa lagu rakibay app MobileGo ku qalab Android aad . Haddii aan, waxa ay haatan u soo dajiyo. Haddii aad jeceshahay in aad isticmaasho cable USB ah, ee app Mobile Go si toos ah rakibi doonaa qalabka Android aad.
Tallaabada 2. dhaqaaq barnaamijyadooda ka computer in qalabka Android la Android 4.4
Dhammaan files qalabka Android aad waxaa lagu muujiyey tiirka ka tagay. Riix Apps inay soo galaan suuqa kala maamulka app. By gujinaya rakib , waxaad ka heli suuqa kala file browser, falgali in folder meesha aad ku badbaadin lahaayeen barnaamijyadooda ah. Riix Open si ay u soo dajiyo.
Sida Resource Online , halkaas waxaa Google Play Apps . Waxaa Riix oo aad si toos ah u qalab Android aad kala soo bixi kartaa oo rakibi barnaamijyadooda la Android 4.4. Haddii aad rabto in aad kala soo bixi barnaamijyadooda ka qaar ka mid ah website-yada kale, sida AppBrain, waxaad riixi kartaa iskutallaabta ku darto websites ka hoos Resource Online .
Best MyPhoneExplorer Alternative ee Phone Android oo Tablet
Sidee inuu ka soo kabsado Photos & Videos ka LG Optimus